Kaominina 10 sy Baolina Chimique
Anarana iombonana amin'ny fiteny iombonana
Ity ny lisitry ny asidra mahazatra folo misy rafitra simika. Ny acids dia fitambarana izay misaraka amin'ny rano mba hanomezana ny ionona / protons na ny akondro.
Ny asidika acetic dia fantatra koa amin'ny asanika etanoika. LAGUNA DESIGN / Getty Images
Acetic Acid: HC 2 H 3 O 2
Antsoina koa hoe: asanika etanoika , CH3COOH, AcOH.
Ny asidra acetic dia hita ao amin'ny vinaitra. Ity asidika ity dia hita matetika amin'ny endrika mangarangarana. Ny asidra acetic (glacial) dia mihodina eo ambany elanelan'ny efitra.
Ity no rafitra simika misy asidra borikana: boribory (pink), hydrogène (fotsy) ary oksizenina (mena). LAGUNA DESIGN / Getty Images
Boric Acid: H 3 BO 3
Antsoina koa hoe: acidum boricum, orthoborate hydrogène
Ny asidra borikika dia azo ampiasaina ho toy ny fanavakavahana na famonoana bibikely. Matetika izy no hita ho vovoka fotsy fotsy.
Ity no rafitra simika misy asidra karbonika. LAGUNA DESIGN / Getty Images
Carbonic Acid: CH 2 O 3
Antsoina koa hoe: asidra aerial, asidan'ny rivotra, carbide dihydrogen, kihydroxyketone.
Ny vahaolana amin'ny gazy karbonika ao anaty rano (rano karbona) dia azo antsoina hoe asidra karbonika. Io no asidra tokana ivelan'ny havokavoka ho toy ny entona. Ny asidra Carbonic dia asidiky osa. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny famongorana vatosokay mba hamokarana endri-javatra geolojika toy ny stalagmites sy stalactites.
Ny asidra asidra dia asidra malemy hita ao amin'ny voankazo voaangona ary ampiasaina ho fitehirizana voajanahary sy manome tsiron-tsakafo. Ny atôma dia aseho amin'ny sora-baventy ary misy loko: karbônina (mainty), hydrogène (fotsy) ary oksizenina (mena). LAGUNA DESIGN / Getty Images
Citric Acid: H 3 C 6 H 5 O 7
Antsoina koa hoe: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic asid.
Ny asidra asidra dia asidra organika malemy izay mitondra ny anarany satria asidra voajanahary amin'ny voankazo misy citrus. Ny chimique dia karazan'antony amin'ny asidra asidra asidra, izay manan-danja amin'ny fikorianan'ny aerôbika. Ny asidra dia nampiasaina ho toy ny tsiranoka sy fanasitranana amin'ny sakafo.
Acid hydrochloric acid
Ity no rafitra simika misy asidolo solitany: chlor (green) ary hydrogène (fotsy). LAGUNA DESIGN / Getty Images
Asidra ranom-boankazo: HCl
Antsoina koa hoe asidra an-dranomasina, chloronium, fanahy sira.
Asidra asidra dia aseho mazava sy manankarena mafy. Hita ao anaty endrika matevina toy ny asidra muriatic. Manana indostrialy sy laboratoara maro ny chimique. Ny HCl dia asidra hita ao amin'ny jasan'ny gaza.
Ity no singa simika asidra asidra fluorine: fluorine (cyan) sy hydrogène (fotsy). LAGUNA DESIGN / Getty Images
Antsoina koa hoe: fluorine hydrène, hydrofluoride, monofluoride hydroxy, fluoridric acid.
Na dia tena mampidi-doza aza izy io, dia asidra asidra malemy ny asidra fluorine, satria tsy dia misaraka tanteraka. Ny asidra dia mihinana fitaratra sy metaly, noho izany dia voatahiry ao anaty tahiry plastika ny HF. Ny HF dia ampiasaina mba hahatonga ny fluorine, toy ny Teflon sy Prozac.
Ity no singa simika misy asidra azota: hydrogène (fotsy), azôty (manga) ary oksizenina (mena). LAGUNA DESIGN / Getty Images
Asidra: HNO 3
Fantatra koa hoe: aqua fortis, asid azotika, asidra grave, nitroalcohol.
Asidra mineraly matanjaka ny asidra asidra. Amin'ny endriny madio dia tsy misy loko izany. Rehefa nandeha ny fotoana, dia lasa loko mavomavo avy amin'ny fatiantoka izy io ka lasa oksida sy rano. Asidra ranom-boasary no ampiasaina mba hamoahana fipoahana sy tavoahangy ary toy ny oxidizer mahery amin'ny fampiasana indostrialy sy laboratoara.
Io no singa simika misy oksika. Todd Helmenstine
Oxalic Acid : H 2 C 2 O 4
Antsoina koa hoe: ethanedioic acid, oxalate hydrogen, ethanedionate, acidum oxalicum, HOOCCOOH, asid oxiric.
Manana ny anarany ny asidalalalika satria nalaina voalohany tamin'ny sira avy amin'ny sorrel ( Oxalis sp.) Izy. Ny asidra dia mavesatra loatra amin'ny sakafo maitso maitso. Izy io koa dia hita amin'ny fanadiovana metaly, vokatra fantsom-paty, ary karazana kilema sasany.
Ny asidra phosphoric dia fantatra ihany koa amin'ny asofeno orthophosphoric na ny fosfosika (V) asidra. Ben Mills
PHOSPHORIC ACID: H 3 PO 4
Antsoina koa hoe: astrophosphoric acid, phosphate trihydrogen, phosphoric acid.
Ny asidra phosphorique dia asidra mineraly ampiasaina amin'ny vokatra fanadiovana an-trano, toy ny fanangonam-bozaka simika, toy ny mpanentsin-daboka ao anaty akoho, ary toy ny tandindom-panafody. Ny asidra phosphorique koa dia asidra manan-danja amin'ny biochemistry.
Ity no rafitra simika misy asidra solfiky.
Asidra Sulphuric : H 2 SO 4
Antsoina koa hoe: asidra battera , asidra asidra, asidala asidra, Terra Alba, menaka amin'ny vitriol.
Ny asidra solifara dia asidra mineraly mahasalama. Na dia mazava ho azy fa mavomavo kely fotsiny aza izy io, dia mety ho mainty mena izy io, mba hampitandremana ny olona amin'ny endriny. Ny asidra solifara dia miteraka areti-mandoza lehibe, ary koa ny hoditry ny rivotra avy amin'ny fanodinana hafanam-po. Ny asidra dia ampiasaina amin'ny pilina fitarihana, fanadiovana rano ary ny famintinana simika.
Inona no atao hoe bronze? Famaritana, fananganana sy fananana
Fomba hahitana ny mari-pana amin'ny Ion
Lisitr'ireo saofona mahery sy malefaka
Inona ny Andro Mofo? - Daty sy fomba ankalazana
Isotopes sy Symbols nokleary: Ny olana momba ny simia
Hetsika fanangonan-tsavily Silver Tree
Vahaolana ve ny varahina?
X Ray Famaritana sy Properties (X Radiation)
Cation definition sy ohatra
Famaritana sy fepetra momba ny Exosphere
Fomba fiasa mahasalama - Rano anaty mikrô
Mbar mankany atm - Mivarotra Millibars mankany Atmosfera
Inona no atao hoe materialisme? - Tantara sy famaritana
Sary mampihorohoro dinôzôra sy profiles
Raha Mamela Hazo Maloto Ianao, Raisanao Hanana Copyright?
Toetoetran'ny ambaratonga lehibe
Manararaotra ny fifantohana amin'ny Ion amin'ny vahaolana
Top 11 Federal Benefit and Assistance Programs
Raha ny fisian'ny Moon ao amin'ny Fisaka - inona no atao?
Ahoana ny fomba hividianana sambokely / sambo skoto amin'ny teti-bola
Fanamboarana fiovana Frantsay
Willamette University GPA, SAT sy ACT Data
Dallas Cowboys no manasongadina fa nanomboka ny ekipa tamin'ny taona 1960
12 Facts Momba ny Marsupials
Inona no atao hoe fihenam-bidy?
Ny Tontolon'ny Fifandraisan'ny Filoha Truman an'ny 1949
Ahoana no ijeren'i Tamar ny rafitra
Watercolor Techniques: Washes roa-loko sy rano madio
Fitaovan'ny akanjo ataon'ny lehilahy Islamika
Politika ara-politika amin'ny taona 1960 sy 1970
Plutarch dia mamaritra ny famonoana an'i Kaisara
Ahoana no hamaritra ny avaratra, atsimo, latina, ary Angloamerika?
Foto-kevitry ny ady Vietnamiana
Ny Hetsika Post-Impressionista
Fihetseham-po amin'ny fisaintsainana ho an'ny mpampianatra
Ny fomba fiasan-draharaha madinika manosika ny fitantanan'i Etazonia